အိုင်ဒါဟို WIC | JPMA, Inc
W Quic es WIC?
စျေးဝယ်ခြင်းမပြုမီသင်၏ Account Balance ကိုစစ်ဆေးပါ
သင်၏ကဒ်ကို WICShopper တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီး“ ကိုနှိပ်ပါ။အကြှနျုပျ၏အကျိုးကျေးဇူးများ"။
အခကြေးငွေမယူသည့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်း (1-844-892-3084) ကိုခေါ်ပါ။
လက်ကျန်ငွေရှာဖွေရန်သင်၏ကဒ်ကိုလျှောချရန်စတိုးငွေကိုင်တစ် ဦး အားတောင်းဆိုပါ။
အပေါ်အကောင့်ဝင်ရန် ebtEDGE.com ဒါမှမဟုတ် ebtEDGE အက်ပ်ထဲမှာပါ။
သင်၏သက်သာခွင့်ချိန်ခွင်လျှာကိုပုံနှိပ်ရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းအားပြောပါ။
သင်၏ WIC သက်သာခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာများသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်၏ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဆေးခန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရမည့်အချက်အလက်များကို WICShopper တွင်တွေ့နိုင်သည်။တစ်ဦး WIC ရုံးကိုရှာပါ"။
တစ်ဦး WIC Store မှာရှာပါ
ကိုထိပုတ်ပါ "WIC StoresWICShopper မှာမင်းကမင်းအနားမှာစတိုးဆိုင်တွေရှာတွေ့လိမ့်မယ်။
စတိုးဆိုင်ဝင်ပေါက်များတွင်“ WIC Accepted Here” ဆိုင်းဘုတ်ကိုရှာပါ။
သင်၏ WIC အစားအစာများအတွက်စျေး ၀ ယ်ပါ
နို့မဟုတ်သော ၁%၊ နို့ ၂% အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများရှိလား၊ or နို့လုံးလား
အဆီနည်း / အဆီမပါသောဒိန်ချဉ်အတွက်သင့်တွင်အကျိုးရှိပါသလား or နို့လုံးဒိန်ချဉ်?
အ ၀ တ်အစား၊ မြုပ်မှု၊ အခွံမာသီးစသည်တို့မပါရှိပါက (အော်ဂဲနစ်အပါအဝင်) လတ်ဆတ်သောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည် တစ်ခုတည်းသော- အကယ်၍ ဤပစ္စည်းသည်အိုင်ဒါဟို WIC အစားအစာစာရင်းရှိအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကမှတ်ပုံတင်တွင်ငွေပေးချေရမည်။ WICShopper ကိုအသုံးပြုသောအခါအသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်“ WIC ပစ္စည်းမဟုတ်” ဟု Scan လုပ်သည့်တိုင်၎င်းသည်မှန်ကန်သည်။scan ကိုဘားကုဒ်"သို့မဟုတ်"UPC ကိုရိုက်ထည့်ပါ" အင်္ဂါရပ်များ။
သင်၏ eWIC ကဒ်ဖြင့်အမြဲတမ်းပေးချေပါ၊ ထို့နောက် SNAP၊ ထို့နောက်အခြားငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများ (ငွေသား၊ အကြွေး၊ ငွေထုတ်) ။
၀ ယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီ WIC သည်သင်၏ WIC ပစ္စည်းများအားလုံးအတွက်ပေးချေမှုရှိ၊
WIC မဟုတ်သောပစ္စည်းများအတွက်ကူပွန်ကိုအသုံးပြုပါကသင်၏ WIC နှင့် WIC မဟုတ်သောပစ္စည်းများအားအရောင်းအဝယ်နှစ်ခုကိုခွဲရန်အကြံပြုသည်။ သင်၏ကူပွန်များကို WIC မဟုတ်သည့်ငွေပေးငွေယူနှင့်သုံးပါ၊ သို့မှသာသင်အပြည့်အဝလျှော့စျေးရရှိမည်။
သင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုသိမ်းထားပါ။ စတိုးဆိုင်၌ပြaနာရှိပါက၎င်းသည် WIC ကို၎င်းအားဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်။
အိုင်ဒါဟို WIC ကတ်များအခြားပြည်နယ်များအတွက်အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သက်သာခွင့်များကိုလ၏နောက်ဆုံးနေ့နေ့လည် ၁၂း၀၀ တွင်ကုန်ဆုံးမည်။
ကွေးခြင်း၊ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်တွင်သို့မဟုတ်သံလိုက် / အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအနီးတွင်မထားပါနှင့်။
သင်၏ PIN ကိုသင်၏ကဒ်ပေါ်တွင်မရေးပါနှင့်။
သင်၏ကဒ်ဖြစ်ပါက ဆုံးရှုံးခဲ့ရခိုးယူသို့မဟုတ်ပျက်စီး အသုံးပြုခကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောလိုင်း (1-877-892-3084) ကိုချက်ချင်းခေါ်ဆိုပါ။ အစားထိုးကဒ်ပြားကို ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းသင့်ထံသို့စာပို့နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လ၏နောက်ဆုံး ၁၀ ရက်အတွင်းသင်စာတိုက်ဖြင့်အစားထိုးကဒ်ပြားကိုမစောင့်နိုင်ပါကကဒ်အသစ်ရရှိရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့သင်သွားရောက်နိုင်သည်။
သင်၏ eWIC ကဒ်သည် PIN နံပါတ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသည်အထိအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဖုန်းမှတစ်ဆင့် - အခမဲ့ပေးဆောင်သော ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်း (1-877-892-3084) ကိုခေါ်။ လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
အွန်လိုင်း - အသုံးပြုခြင်း ebtEdge.com သို့မဟုတ် ebtEDGE အက်ပ်
သင်၏ WIC အကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ
“ Account Services” ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ PIN ကိုမှန်ကန်စွာစာရင်းသွင်းနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းလေးခုရှိသည်။ စတုတ္ထမမှန်ကန်သည့်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးတွင်သင်၏ကဒ်ကိုသော့ခတ်လိမ့်မည်။
သင်၏ PIN ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်သင်၏ကဒ်ကိုချက်ချင်းသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ မဟုတ်ပါကနောက်တစ်ရက်မနက် ၁၂း၁ နာရီတွင်သင်၏ကဒ်သည်အလိုအလျောက်သော့ဖွင့်နိုင်သည်။
သင်၏ပင်နံပါတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ သင်၏ PIN နံပါတ်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကသိပါကသင်၏သက်သာခွင့်များကိုရယူရန်သင်၏ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုသက်သာခွင့်များကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
မိသားစုတွင် WIC ကဒ်ဘယ်နှစ်ရှိသနည်း။
မိသားစုတစ်ခုစီတွင်ကဒ် ၂ ခုအထိရှိနိုင်သည်။
မွေးစားမိဘများအတွက်မွေးစားကလေးတစ် ဦး စီအတွက်သီးခြားကဒ်ရှိရမည်။
သင်၏ WIC ဆေးခန်းဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ WIC ၌သင်၏စာပို့လိပ်စာနှင့်စာပို့သင်္ကေတများရှိကြောင်းအမြဲစစ်ဆေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
သင်၏အစားအစာသက်သာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်သမျှပြောင်းလဲမှုများကိုဆွေးနွေးရန်သင် WIC ဆေးခန်းနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
မဟုတ်ပါ၊ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုသော WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များသည်လ၏နောက်ဆုံးနေ့သန်းခေါင်ယံတွင်ကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန်အိုင်ဒါဟို WIC အစားအစာစာရင်းကိုစစ်ဆေးပါ
ကိုထိပုတ်ပါ "ဒီဟာကိုကျွန်တော်မဝယ်နိုင်ဘူး။ ” WICShopper နှင့်ပုံစံကိုဖြည့်ပါ
ထုတ်ကုန်၏ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ။ ပို့ပါ WICUPC@dhw.idaho.gov ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်။ ဓါတ်ပုံများတွင်ပါဝင်သင့်သည် -
အကယ်၍ စတိုးဆိုင်သည်အမှားတစ်ခုလုပ်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်မန်နေဂျာနှင့်ချက်ချင်းစကားပြောပါ၊ သူတို့သည်သင်စတိုးဆိုင်မှမထွက်ခွာမီဤအမှားကိုပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ မန်နေဂျာသည်၎င်းကိုမပြုပြင်နိုင်ပါကသင်၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့ဖုန်းဆက်ပါသို့မဟုတ်အခကြေးငွေမယူသည့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်း (1-844-892-3084) ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
ကဒ် & PIN နံပါတ်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခိုးခံရလျှင် (သို့) ပျက်စီးလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်၏ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခိုးခံရခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းခံရလျှင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လိုင်း (1-844-892-3084) သို့ချက်ချင်းသတင်းပို့ပါ။
ကုန်စုံဆိုင်၌ပင် PIN နံပါတ်မှားယွင်းပါကမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
သင်၏ PIN နံပါတ်အမှန်ကိုရိုက်ထည့်ရန်အခွင့်အရေးလေးခုရှိသည်။ စတုတ္ထအကြိမ်ကြိုးစားပြီးနောက်သင်၏အကောင့်ကိုသော့ခတ်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ PIN ကိုမမှတ်မိနိုင်ပါကသို့မဟုတ်သင်၏အကောင့်ကိုသော့ခတ်ထားပါကအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုခံသူလိုင်း (1-844-892-3084) သို့ခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ်သင့် PIN ကိုပြောင်းလဲရန် ebtEDGE ကိုဆက်သွယ်ပါ။
PIN ကို (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသက်သေခံနံပါတ်) ကဘာလဲ?
သင်၏ PIN သည်ကုန်စုံဆိုင်၌သင်၏အိုင်ဒါဟို WIC ကဒ်ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသောဂဏန်းလေးလုံးပါနံပါတ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ PIN ကိုရွေးချယ်သည်အထိသင်၏ကဒ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်မှတ်မိရန်လွယ်ကူသောနံပါတ်လေးခုကိုရွေးချယ်ပြီးအခြားသူတစ် ဦး ခန့်မှန်းရန်ခက်ခဲသည်။
မည်သူ့ကိုမျှသင်၏ PIN ကိုဘယ်သောအခါမျှမပြောပြပါနှင့်။ သင်၏အိုင်ဒါဟို WIC ကဒ်တွင်သင်၏ PIN ကိုမရေးပါနှင့်။ သင်၏ PIN နံပါတ်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကသိပါကသင်၏သက်သာခွင့်များကိုရယူရန်သင်၏ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုသက်သာခွင့်များကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။